नेइमारको सपना ध्वस्त भएको रात ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेइमारको सपना ध्वस्त भएको रात !
मस्को । रसियामा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा अविश्सनीय परिणाम आउने क्रम जारी छ । २१औं संस्करणमा धेरै टिमले नसोचेको नतिजा भोग्नु परेको छ । विश्वकपका दाबेदार मानिएका टिम एकपछि अर्को गरि घर फिर्ताले धेरैलाई अचम्भितसमेत तुल्याएको छ ।
सायद कमैले सोचेका थिए, ब्राजिल पनि यति चाँडै घर जान्छ होला । तर त्यो सोच विपरीतमा परिणत भएको छ, र पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिल पनि छिट्टै घर फर्किएको छ । समूह चरण र अन्तिम १६ सम्म आइपुग्दा ब्राजिलको प्रदर्शन सानदार नै थियो । यस्तै, उसँग स्टार खेलाडी पनि साथमा भएकाले यो पटक उपाधी ब्राजिले नै लिन्छ भन्ने थियो । तर दुर्भाग्य त्यसो हुन पाएन । ब्राजिलको भाग्यले साथ दिएन ।
ब्राजिलले छैठौं पटक विश्वकप जित्छ भन्ने सबैभन्दा आशा गरिएको कारण अहिलेको पुस्ताका स्टार नेइमार भएर हो । तर बेल्जियमसँग भएको खेलमा नेइमारले जादू देखाउन सकेनन् । र ब्राजिलले हार बेहोर्नु पर्यो । विश्वका सर्वाधिक महंगा खेलाडी नेइमारआवद्ध टिम हार्नुमा धेरै चकित छन् । हुनत खेलमा सधैं जित मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । तर पनि नेइमार जस्ता अहिलेका स्टार खेलाडी रहेको टिम आत्मघाती गोलका कारण हार्नु भने निकै आश्चर्यको कुरा मान्न सकिन्छ ।
ब्राजिलमा जस्तै स्टार खेलाडीले भरिएको बेल्जियम विश्वकपको सबैभन्दा बलियो दाबेदार बनेर उदाएको छ । पहिलो हाफमा सम्हालिन नसक्दा ब्राजिल घर फर्किन बाध्य भयो । चार वर्षअघिको विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्म पुगको ब्राजिल यसपटक क्वाटरफाइनलबाट बाहिरियो । ब्राजिल घर फर्कियो । यसको अर्थ नेइमार पनि घर फर्किए । अन्तिम १६ बाट क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी तथा क्वाटरफाइनलबाट नेइमार घर फर्किए । अब रुस विश्वकपमा यो समयका स्टार खेलाडी रोनाल्डो, मेस्सी र नेइमारलाई देख्न पाइने छैन ।
यो पटक नेइमारको सपनामा टुट्यो । उनको आफ्नो देशलाई विश्वकप जिताउने धोको यो पटकका लागि अधुरै रह्यो । जर्मनी, अर्जेन्टिना। पोर्चुगल, स्पेन जस्ता बलिया टिम बाहिरिएपछि धेरैको आशंका यो पटक नेइमारको भाग्य चम्किन्छ । तर दुर्भाग्य नेइमारको भाग्य पनि चम्किन सकेन । उनले पनि रोनाल्डो र मेसीजस्तै उपाधी नलगेरै घर फर्के ।
चार वर्षअघि घरेलु मैदानमा भएको विश्वकपमा नेइमार चोटग्रस्त भएर क्वाटरफाइनलपछि खेल्न सकेनन् । उनी बिनाको ब्राजिल जर्मनीसँग सेमिफाइनलमा इतिहासकै खराब हारको शिकार बन्यो ।
नेइमारले टुलुटुलु हेरिमात्रै रहे, गर्न सक्ने पनि केही थिएन । तर चार वर्षपछि उनी ब्राजिलको टिमलाई थप बलियो बनाएर विश्वकपको सपनासहित रुस पुगेका थिए ।
विश्वकप अघि मात्रै मैदान फर्किएका नेइमारले पहिलो खेलमा त्यति राम्रो गर्न सकेनन् । तर दोस्रो खेलमा उनी र फिलिप कोन्टिन्होको गोलबाट ब्राजिलले जित निकाल्यो । तेस्रो खेलमा पनि उनको प्रदर्शन सुधारिएको देखियो ।
अन्तिम १६ को खेलमा जित निकाल्दा नेइमारकै भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । यो सबैले नेइमार र उनीसँग जोडिएका सपनाहरु पूरा हुने लाइनमा गए जस्तो देखिएको थियो । तर उनको ब्राजिलियन सपनामा तगारो बनेर आयो बेल्जियम । कजानमा नेइमार निराश देखिन्थे । उनलाई सायद अब फेरि विश्वकपको सपना पूरा भएको हेर्नका लागि अर्को चार वर्ष पर्खिनु पर्ने भयो भन्ने लाग्दै गयो । नेइमारको चारी विश्वकमा धेरै आलोचना पनि भयो ।
चाहिनेभन्दा बढी नाटक गरेको भन्दै उनको आलोचना तिव्र भयो । तर पनि उनको खेल भने आकर्षक नै रह्यो । नेइमारप्रति जति टिप्पणी भए पनि ब्राजिलको लोभलाग्दो खेलले ति सबै फिक्का बनाइदियो भन्दा फरक नपर्ला । अब नेइमारको र उनको टिमको खेल हेर्न चार वर्ष कुनुपर्ने भएको छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: Brazil, Fifa world cup 2018, Neymar